Okuncane okuluhlaza okwesibhakabhaka - I-Airbnb
Okuncane okuluhlaza okwesibhakabhaka
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Adina
U-Adina Ungumbungazi ovelele
Isitudiyo esisha sha esifakwe kahle esikulindile ekungeneni kwakho eSinaia, ngaphambi kokuthi kwande isiminyaminya futhi kudle impelasonto yakho kanye nesineke sakho esisele.
Indawo ehlotshiswe kahle, evulekile, enegumbi lokuhlala elithandekayo elinemibhede ethokomele yosofa. Izosingatha ngokunethezeka okungu-3, mhlawumbe okungu-4 ngokuhamba kwesikhathi. Ukubuka okuhle, ukufinyelela okulula, ingcindezi iyancibilika ngokushesha nje lapho ufika.
Wamukelekile ukusebenzisa ifulethi lonke, sicela ube nomusa futhi ucabangele. Konke kuhlanganiswe ngothando nokunakekelwa. Ngiyaqaphela ukuthi izingozi ziyenzeka, ngakho-ke uma kwenzeka kube nomthelela omubi kwizihambeli ezilandelayo.
Le ndawo yintsha, inezindawo zokudlala zezingane, nendawo yokudlela ethandekayo ngaphandle nje kwesakhiwo. Ithole ukubuyekezwa okuhle ikakhulukazi ezivakashini ezihlala.
Ngeke ngitholakale mathupha, kodwa ngokuqinisekile ngiyatholakala kulayini, futhi kukhona umuntu omethembayo endaweni, uma udinga usizo esizeni.
UAdina Ungumbungazi ovelele